PressReader - Ilanga: 2018-07-12 - Bakhala ngokwenziwa izichuse yiPSL
Bakhala ngokwenziwa izichuse yiPSL
IPSL ithi umhlangano ubizelwe ukuzobikela amakilabhu ngesinqumo
Ilanga - 2018-07-12 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
BABALISA ngokwenziwa izichuse abamakilabhu ePremier Soccer League (PSL) ezosingatha umhlangano weBoard of Governors (BoG) namuhla ngoLwesine eGauteng.
Kulo mhlangano kuzobhungwa ngenzukazikeyi yodaba oluphakathi kwe-Ajax Cape Town nePSL.
Ubuholi obuphezulu bePSL bebuhlangene ngeledlule, kwathathwa isinqumo sokusiphonsela inselelo isinqumo seJaji uDenise Fisher sokubuyisela amaphuzu i-Ajax ebiphucwe wona ngu-Advocate William Mokhari. Iphucwe amaphuzu ngokudlalisa kungafanele uTendai “Fire” Ndoro odlalele amakilabhu amathathu ngesizini eyodwa, okuyinto ephambene nemigomo yeFederation of International Football Association (Fifa).
Amakilabhu akhala ngokuthi achithelwa isikhathi ngokubizelwa kulo mhlangano ngoba iPSL isisithathile isinqumo. Esinye isikhulu sekilabhu ye-Absa Premiership sithi asisiboni isidingo salo mhlangano.
“Bathathe isinqumo ngaphandle kokuxhumana namakilabhu. Siyofunzwa ukuthi isinqumo sesithathiwe.
"Ngibona sengathi sibukelwa phansi. Ngiyayizwela iPSL kulesi simo, kodwa bekuzokuba ngcono ikhiphe isinqumo ngesinyathelo sayo ngemuva kokuxhumana nathi,” kusho lesi sikhulu esiligodlile igama laso.
Esinye isikhulu sekilabhu yePremiership, sitshele leli phephandaba ukuthi sidonswe ngendlebe ukungasho lutho kulo mhlangano.
“Mina ngiyokotha abazokube bebambe umhlangano. Kakukho ngisho okukodwa engizimisele ngokukusho kulo mhlangano. Kawukwazi ukuthatha isinqumo bese ubiza umhlangano. Ngicabanga ukuthi bekumele kubizwe amakilabhu abe yingxenye yokuthathwa kwesinqumo,” kusho lesi sikhulu esinxuse ukungadalulwa.
UMato Madlala oyisikhulu esiphezulu esibambile kwiPSL, uthe lo mhlangano kuhloswe ngawo ukucacisela amakilabhu ngesinqumo esithathwe yisigungu esiphezulu ngeledlule.
“Isinqumo vele sesithathiwe. Nokho-ke sinesibopho sokubikela amakilabhu ngokuqhubekayo. Amakilabhu kawakaze achazelwe yiPSL ngesinqumo, ngakho-ke kumqoka ukuba azi ngoba awumgogodla weligi,” kusho uMato okunguyena yedwa owesifazane onekilabhu kwi-Absa Premiership.
ULuxolo “Lux” September wezokuxhumana kwiPSL, uthe kayikho ikilabhu esike yabika ukungahambisani nokuhlaliswa komhlangano wanamuhla. Uthe ngeke aphawule kabanzi ngento eshiwo emoyeni, engabhaliwe phansi. Uthe akwaziyo wukuthi umhlangano uzoqhubeka namuhla.
UMATO Madlala oyisikhulu esiphezulu esibambile kwiPSL uthi inhloso yokubiza amakilabhu ngukuwacacisela ngesinqumo esesivele sithathwe yiPSL.